Hongkong tourist ဟောင်ကောင်ခရီးသည် (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » Hongkong tourist ဟောင်ကောင်ခရီးသည် (၂)
Hongkong tourist ဟောင်ကောင်ခရီးသည် (၂)
Posted by kyawmonkhant on Jan 11, 2012 in Copy/Paste | 8 comments
ရန်ကုန်ကနေ ဗန်ကောက် လေယာဉ်မောင်းချိန် ၁ နာရီ ၅ မိနစ်ဟု လေယာဉ်မှူးကြေညာသံကြားလိုက်သည်။ အမြင့်ပေ သုံးသောင်းကျော်မှပျံသန်းသည်။ လိုအပ်သည့် အမြင့်ရောက်တော့ လေယာဉ်မယ်များက အဆာပြေ ကျွေးရန် စတင်လှုပ်ရှားကြသည်။
အသုတ်တပွဲ၊ ရွှေချီတစ်တုံး၊ ရေတခွက်၊ အချိုရည်တစ်ဘူး၊ ဆားထုတ်၊ငြုပ်ကောင်းမှုန့်တထုပ်၊ သကြားတထုတ်၊ နို့မှုန့်တထုတ်၊ ကော်ဇွန်း၊ ကော်ခရင်း၊ ကော်ဓား၊ သွားကြားထိုးတံ တစ်ချောင်း၊ တစ်ရှုးလက်သုတ်ပုဝါတစ်ခု၊ ရေစိုတစ်ရှုးတစ်ထုတ်၊ ကော်ဖီ လဘက်ရည်ထည့်ရန် ခွက်တစ်ခုတို့ပါဝင်သည်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် မေ့သွားခဲ့သည်။ နို့မို့ဆို ရွာသားတွေကို လေယာဉ်ပေါ်မှ အဆာပြေ ကျွေးလို့ရသည်။ (အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူများကိုသာရည်ရွယ်ပါသည်။) သိပ်တော့ အကောင်းကြီးတော့ မဟုတ်။
အရည်အနေဖြင့်၊ အရက်၊ ၀ိုင်၊ အချိုရည်၊ ကော်ဖီ၊ လဘက်ရည် ၊ ရေများတိုက်သည်။ အရက်ကတော့ ဘယ်လောက်တိုက်သည် မသိ။ အချိုရည် လဘက်ရည် ကော်ဖီကတော့ ၀အောင်သောက်လို့ရသည်။ ထိုင်ခုံရှေ့က အိပ်ထဲတွင် လေယာဉ်အရေးပေါ်ကြုံလျှင်ဆောင်ရွက်ရမည့် အရာများကို သရုပ်ပြပုံဖော်ထားသော စာရွက်တရွက် နှင့်။ စက္ကူအိပ်တစ်ခု၊ မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်၊ ဂျူတီဖရီး ဈေးဝယ်ရန် ပစ္စည်းများစာရင်းရှိသည်။ စားသောက်ပြီး ပစ္စည်းများ သိမ်းကာ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ၀င်မည့်သူများအတွက် ၀ှိုက်ကဒ် (အင်မီဂရေးရှင်းပေးရန်ကဒ်) နာမည်၊ ပတ်စ်ပို့နံပါတ်၊ တည်းမည့်နေရာ စသည်များဖြည့်ရသော ကဒ်များလိုက်ပေးသည်။ တချို့ အောက်ရောက်မှ ဖြည့်ကြသည်။ မကြာမီ သုဝဏ်ဏဘူမိလေဆိပ်ဆင်းတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာသည်။ လေဆိပ်ရောက်တော့ ကျုဖြင့်မဟုတ်ဘဲ လှေကားဖြင့်ဆင်းကာ ကားပေါ်တက်ရသည်။ ကားဖြင့် လေဆိပ်ဝင်ပေါက်အထိလိုက်ပို့သည်။
ထိုင်းလေဆိပ် လေယာဉ်ပေါ်မှ အဆင်း
လေဆိပ်ဝင် နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၁၁ နာရီ ၄၅ ရှိနေပြီ။ ပထမတော့ လေဆိပ်ထဲ လျှောက်လည်ဖို့ စိတ်ကူးသေးသည်။ တော်ကြာနောက်ကျနေမှာစိုးသဖြင့် HK သို့သွားမည့် ဂိတ်ပေါက် E8 ကိုရှာရသည်။
ဟောင်ကောင်သွားမည့်လေယာဉ်စီးရမည့် ဂိတ်နံပါတ် (၈)
အချိန်ကတော့ သိပ်ပြဿနာမရှိ အေးအေးဆေးဆေး သွားလို့ရသည်။ ဟောင်ကောင်လေယာဉ်က ၃ နာရီမှ ထွက်မည်။ ဟိုဟိုသည်သည်ကြည့်ရင်း ငေးရင်းဖြင့် သွားဖြစ်သည်။ ဂိတ်ရောက်တော့ ၁၂ နာရီကျော်ပြီ။ သို့သော် ဂိတ်ကမဖွင့်သေးပေ။ နာရီဝက်လောက်စောင့်ရသည်။ ခဏထိုင်ကာ အမောဖြေလိုက်သည်။
တစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ ဟိုငေးသည်ငေး ဟိုတွေးသည်တွေး၊
အပြင်ဘက်က လေယာဉ်တွေထွက်တာကို ငေးကြည့်နေမိသည်။
ဂိတ်ဖွင့်တော့ အထဲဝင်လိုက်သည်။ စောသေးသည့် အတွက် လူများ သိပ်မရှိသေး၊ အထဲတွင် တနာရီခန့် ထပ်စောင့်ရသည်။
၂ နာရီ ၂၀ တွင် လေယာဉ်ပေါ်တက်ရသည်။ လေယာဉ်ပျံသန်းချိန် ကလဲ ၂ နာရီ ၂၀ ခန့်ကြာသည်။
ဟောင်ကောင်လေဆိပ်ဆင်းကာနီးတော့ ပင်လယ်ထဲ ထိုးဆင်းနေသည်ဟု ထင်ရသည်။ အောက်က သင်္ဘောကြီးများ သွားနေသည်ကို မြင်ရသည်။ ရေနဲ့နီးနီလေးဟု ထင်ရသည်။ လေယာဉ်ဆိုက်တော့ ၅ နာရီခွဲ၊ လေယာဉ်မှ ဆင်းကာ အင်မီဂရေးရှင်းသွားရန် ရထားလေး ၅ မိနစ်ခန့် စီးရသည်။ ရထားကဆင်းပြီး အပေါ်ကို စက်လှေကားဖြင့် တက်ရပြန်သည်။ အင်မီးဂရေးရှင်းရောက်တော့ များလိုက်တဲ့လူတွေ ကွေ့ပတ်ပြီးတန်းစီရသည်မှာ လေးငါးရာခန့်ရှိသည်။ နောက်ကလဲ ၀င်လာမစဲ တသဲသဲ။ နာရီဝက်ခန့်ကြာမှ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်တော့သည်။ ဒါတောင် ကောင်တာတွေများပေးလို့ ။ ပတ်စ်ပို့ကြည့် လူကြည့်ကာ တုံးထုပေးလိုက်သည်။
ဒီနေ့တော့ ကိုသစ်မင်း၏ နည်းပေးလမ်းပြမှုကြောင့် ပို့စ်တင်ရတာအဆင်ပြေသွားပါသည်။ အားပေးကြသော သူကြီး၊ ကိုစိန်သော့၊ မ pooch၊ မMoe z ၊ ကိုနို၊ ကိုပေ တို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ တကယ်ပါ ရွာသူရွာသားများ အားပေးမှုကြောင့် ဓာတ်ပုံတင်ရာမှာလည်း အကြိမ်များစွာ (များစွာ)လုပ်ဆောင်ရင်း၊ အချိန်များစွာ ပေးလိုက်ပါသည်။ ပုံလေးတွေလဲ အဆင်ပြေသွားပါသည်။
kyawmonkhant ရေ ရှန်းကန်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေမျော်နေပါတယ်….
ခရီးသွားဆောင်းပါး ကောင်းလေးတစ်ပုဒ် ပါဘဲ..
တိမ်ပုံလေးတွေက မြင်ရခဲတယ် ကိုကျော်မွန်ခန့်ရေ တကယ်လှပါတယ် ..
နောက်ထပ်လည်း များများတင်နိုင်ပါစေသတည်း ….
နော်တို့ တွက် ဗဟုသုတရပါ၏..
ကျွန်တော်တို့လေ အလှမ်းဝမ်းတဲ့သူတွေ ဗဟုသုတ ရအောင် ရိုက်ပြပေးပါအုံး
အဂ္ဂမဟာသရေစည်သူ၊အဂ္ဂမဟာသသီရိသုဓမ၊ သီရိပျံချီ အလကားမတ်တင်းဘွဲ့များပိုင်ဆိုင်ထားသော ကျွန်ုပ်မောင်ကင်း
စာရေးအားတစ်ယောက် တိုးလာပြီမို့ ကြိုဆိုပါတယ်။
ရေးရင်း ရေးရင်းနဲ့ ဈာန်တွေဝင်၊
အဲဒါ သဂျီးပေးတဲ့ ရွာ့သူားတွေရဲ့ ဒုက္ခ။
တိမ်ပုံတွေ ကို အရမ်းကြိုက်မိသွားတယ် ဗျို့ 